Kulanka hogaamiyeyaasha garabka midig ee miisaaniyadda Gu'ga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Malin Hoelstad / SvD / SCANPIX
Kulanka hogaamiyeyaasha garabka midig ee miisaaniyadda Gu'ga
La daabacay fredag 23 augusti 2013 kl 14.51
Muddo qiyaastii ey iminka ka har-san yihiin afar toddobaad (18-ka bisha septeembar) waxay dawladdu hor-geeyn doontaa baarlamanka miisaaniyadda sannadka foodda innagu soo haya 2014, kuna beegan sannadkii doorashada.
Waana saansaan laga dareemeyo dhaqdhaqaaqa doorashada, kolka ey afarta hogaamiye ee xisbiyada garabka midig maanta kulankooda isugu yimaadaan Harpsund, sidii ey uga wada xaajoon lahaayeen miisaaniyadda 2014.
Jonas Hinnfors, wuxuu ku takhasusay culuunta dawladda, isagoona ka howl-gala jaamicadda Göteborg:
- Waxaa aamin-sanahay in la oran karo haddii aannu horay u bilaaban in kulankani noqon doono mid bilaaba tartankii doorashada. Waana miisaaniyaddan middaa doorashada. Waana midda laaqiyadda u yeeleeysa tartanka.
Carriga Harpsund ee Södermanland ayey ku kulmaan hogaamiyeyaasha xisbiyada garabka midig haddahaayaa, dhan sidii ey u qaban lahaayeen caadadii cunitaanka carsaanta ee kuleeylaha dabadii iyo midda ugu muhiimsan oo ah iney ka wada xaajoodaan miisaaniyadda sannadka foodda innagu soo haya.
Toddobaadyadii ugu dambeeyey ayey hogaamiyeyaasha xisbiyada garabka midig si gaar ah ugu soo ban-dhigeen hoowlaha ey muhiimadda siineyaan kolka kulanka la isugu yimaado. Xisbiga Shacabka ayaa xoogga saaray kor u qaadidda mushaarooyinka macallimiinta iyo hab cusub ee barashada xirfadaha. Xisbiga Dhexe ayaa soo jeediyay howlo lagu dardar-gelineyo shirkadaha yaryar, tusaale ahaan in laga joojiyo waajibka iney bixiyaan toddobaadka labaad ee kharashka xannuunka shaqaalaha. Halka uu xisbiga Kristendimoqoraadigu xoogga saaray dhimista cashuurta ee gunnada howl-gabka iyo kor u qaadida tirada shaqaalaha ee dugsiyada xannaanada. Halka uu xisbiga Mudaraatku xooggiisa ugu weyn isugu geeyay dhimista khidmadda ee jaranjarada shanaad.
Sidaa daraadeed maadaama miisaaniyaddani tahay sannadkii doorashada, isla-markaana xisbiyada yaryar ee garabka midig uu hayo ciriiri dhanka taageereyaasha loo baahan doonaa in xisbi walba uu helo su'aalihiisa ugu muhiimsan, sida ay aamin-san tahay Malena Rosén Sundström, oo ka hoel-gasha jaamicadda Lund:
- Waa mid aan aamin-sanahay. Inkasta oo xisbiga Mudaraatku yahay midka ugu muhiim-san ayaa haddana loo baahan yahay in la muujiyo wada-jir. Sidaa daraadeed ay muhiim u tahay in xisbiyada kale ey hilibka cadkooda ka helaan.
Machadka saadaalinta dhaqaalaha KI oo baaritaan ku sameeya xaaladaha dhaqaale ayaa sheegay in aanay jirin miisaaniyad dhaqaale ee sidaa u baaxad weyn si loogu qabto howlo dheeri ah. Waa suurtagal aan ballaarnayn. Haddii la dooneyo in dawladdu hiigsato goolkeeda ah saqafka miisaaniyadda.
Machadka ayaa qiyaasaya in ugu badnaan la heli karo miisaaniyad gaarsiisan lix bilyan oo koron illaa iyo sannadka 2017.
Shaqa la'aanta oo heerkeedii sare weli taagan, farqiga dabaqadaha oo sii xoogeeystay, baahida ka taagan iskuullada iyo goobaha dar-yeelka caafimaad. Dhammaan waxyaabahaasi ma suurtagelineyaan in miisaaniyaddani noqoto middii lagu guuleey-san lahaa, sida ay sheegtay, Malena Rosén Sundström:
- Cashuurta oo la dhimo ma noqon kareeyso mid lagu hantiyo doorasho iyada oo ey jiraan xaalado laga niyad-jabsan yahay habka nolol-wanaagga, waxa loo yaqaanno Välfärden.